Dagaal beeleed sababay 3 dhimasho ah, iyo 10-neeyo dhaawac ah. – Radio Daljir
Seteembar 19, 2009 12:00 b 0
Gabiley, Sept 19 – Laba beelood oo ardaa wadaag ah, horena dad isaga laayey ayaa mar kale dagaal ka dhex garxay. Sida la xaqiijiyey 3 qof ayaa dhimatay, halka dhawr iyo tobanna ay dhaawacyo soo gaareen.
Ddagaalka ayaa salka ku haya muran ka dhashay deegaan iyo dhul-daaqsin u dhexeeya labada beelood ee dagaalku dhex maray.
Caalmaka Islaamka oo maanta laga xusay munaasabada Ciid al Fitr. [Dhegaysi …]
Taliyayaasha ciidanka Daraawiishta & Qalabka-sida ee Somaliya oo la sheegay in ay ku dhinteen qaraxyadii Muqdisho. [Dhegaysi …]